Njakatiana: « Ny ahy », hanome fofony ny rakikira vaovao | NewsMada
Njakatiana: « Ny ahy », hanome fofony ny rakikira vaovao
Hifanakaiky kokoa amin’ireo mpankafy. Hitondra ny hira vao sy hamerina ny taloha ihany koa i Njakatiana, anatina seho iray hiavaka.
Tsy mandalo fotsiny amin’ny sofin’ny mpankafy ny hira vaovao. Andro vitsivitsy izay no nahenoan’izy ireo ny « Ny ahy », hiran’i Njakatiana vaovao. Narahina rakitsary mandeha amin’ny fahitalavitra ihany koa izany. Ho an’ireo nanaraka azy hatramin’izay dia mahalala fa tsy nivaona ary nanaraka ireo hira mihetsiketsika nahafantarana an’i Njakatiana hatramin’izay izy ity.
Fofompofony amin’ireo hira vaovao, handrafitra ny rakikira manaraka io. Fantatra mantsy fa eo am-pamolavolana izany ity mpanakanto ity sy ny tariny amin’izao fotoana izao. Anisan’ireo hira hoentiny an-tsehatra mandritra ilay fihaonana manaraka, hotontosaina ny 21 septambra izao, manomboka amin’ny 9 ora alina, etsy amin’ny Cemess Soanierana izany.
Seho haka endrika « cabaret », izany hoe hifanakaiky kokoa amin’ny mmpankafy azy i Njakatiana amin’io fotoana io. Hibahana anatin’ny fiarahana ireo hirany, saingy hitondra an-tsehatra ny hirana mpanakanto hafa ankafiziny ihany koa ity mpanakanto ity mandritra izany.
Marihina fa io ny « cabaret » farany hataony, amin’ity taona ity, satria hiatrika indray ny fivoahana any ivelany i Njakatiana.